Na-agbakwunye ndị debanyere aha ndị abanyeghị na. Ọ bụrụ n'ịga ịzụta ndepụta ma ọ bụ tụfuo pasent buru ibu nke ndị debanyere aha na ndepụta gị, ya ejula gị anya ma ọ bụrụ na ịchọtala nnukwu akaụntụ email gị egbochi ma ọ bụ mechie.
Na-eme ya siri ike wepu aha ya. Kwụsị ime ka ndị mmadụ banye ma ọ bụ wụfee site hoops iji wepu aha gị na listi nzipu ozi gị. Na-aga ịmanye ha ịkụ bọtịnụ SPAM.
Hapụ a akpọ-na-eme. Gịnị mere ị ga-eji ziga ozi ma ọ bụrụ na ịchọghị ka mmadụ zaghachi n'ụzọ ọ bụla? Ekwela oge ha ma ọ bụ nke gị!